Suárez Oo Ku Qarxay Etihad Iyo Messi Oo Rajo Galliyey City + Sawiro
HomeChampions LeagueSuárez Oo Ku Qarxay Etihad Iyo Messi Oo Rajo Galliyey City + Sawiro
Luis Suarez ayaa astaan lagu xasuusto u yeelay ayaantii koobaad ee uu dib ugu noqdo Ingiriiska tan iyo maalintii uu £75m ugu wareegay Barcelona, isagoo shabaqa dhigay laba gool oo daran doori ah kuwaas oo fiyaarada ama albaabka laga baxo ee horyaalka Champions League dhigay kooxda Manchester City.
Weeraryahankii hore ee naadiga Liverpool ayaa ka faa’iidaystay burburka iyo is dhex yaac ka muuqday difaaca kooxda ka ciyaarta horyaalka Premier League – waxaanu qaybtii hore ee ciyaartaba si qurux badan u dhamaystiray laba weerar oo ay Catalanku soo qaadeen , kuwaas oo ka dhigay Barcelona naadiga leh gacanta sare ciyaarta dambe ee wareega 16 ka horyaalka Champions Leagu.
City ayaa isa soo canaanatay oo dedaal badan muujisay qaybtii dambe ee ciyaarta, waxaana u suurto gashay in weeraryahan Sergio Aguero uu rajo fiican galliyo kooxdiisa gool muhiim ahna u soo celiyey, waxayse xaaladu ku sii xumaatay markii xanaaqad uu sameeyey Gael Clichy garsoorihii ciyaartu ku abaal mariyey huruudii labaad oo casaan isu bedeshay sidaasna ciyaarta dibada loogaga saaray kooxda tababare Manuel Pallegrinina 10 ciyaaryahan ku soo hadhay.
Waxaase kaga sii darnayd markii dhamaadkii ciyaarta, tiiyoo uu socdo wakhtigii dheeraadka ahaa ee lagu daray, Difaacyahan Pablo Zabaleta xerada ganaaxa dhexdeeda uu ku legday weeraryahanka Leonel Messi, Barcelona ayaana lagu abaal mariyey Rigoodhe.
Goolkii saddexaad ee Barcelona , rigoodhihii Messi isa soo kortaagay waxaa si la yaqaan u badbaadiyey, rajadii Manchester Cityna nooleeyey, goolwadaha cabqariga ah ee Joe Hart oo soo tufay Laagii Leo, nasiib darose kubadii soo noqotay oo ahayd fursad labaad, Messi ayaa madaxeeyey lana waayay goolka oo aan cidina ka xigin.
TELESOM oo Dib u Casriyeyn Ku Samayn Doonta Hargeysa Stadium + Sawirro
16/08/2015 Abdiwahab Ahmed
Tottenham Hotspur vs Apoel 3-0 – All Goals & Highlights
06/12/2017 Abdiwahab Ahmed
Mourinho: Horyaalkii u dambeeyey ee aan qaado 18 bilood baa laga joogaa – maaha 18 sanno